eNasha.com - तृप्ति नाडकर
आमाको माइतमा !
कसैकसैको जिन्दगी अचम्मको हुन्छ । जन्मिन्छ कहाँ, कर्मथलो हुन्छ कहाँ ! कुसुमे रुमाल, सम्झना र लाहुरेको अनेक पात्रलाई झट्ट सम्झनु पर्‍यो भने त्यहाँ अरुभन्दा बढी नायिकाको सम्झना आउँछ । ती सिर्जनालाई जीवन्तता दिने उही पात्रा हुन्, तृप्ति नाडकर ।
गुजराती र मराठी सिनेमामा नाम कमाइसकेकी तृप्तिलाई जब नेपाली सिनेमामा खेल्ने प्रस्ताव आयो, उनका लागि त्यो एउटा सुखद् प्रस्ताव थियो । यो उनका लागि भारतको कुनै अर्को प्रान्तीय सिनेमामा खेल्नुजस्तो अनुभव थिएन । यो उनकी आमाको मातृभाषा थियो र यी सिनेमा खेलुञ्जेल उनलाई आफ्नी आमाप्रति चुकाउनुपर्ने ऋण सम्झिरहिन् । यस्तो ऋण लामो समयपछि अझै पनि चुक्ता गर्न बाँकी रहेको ठानिरहेकी छिन्, हिन्दी, अंग्रेजी र मराठी मिश्रति लवजमा उनी भन्छिन्- "कोसेली खेलिसकेपछि मैले मेरो नेपाली फिल्ममा खेल्ने भाग सकिइसकेछ भन्ने सोचेकी थिएँ तर अहिलेको व्यस्तता हेर्दा त यस्तो लाग्छ, चुक्ता गर्न बाँकी ऋण अझै धेरै छ ।"
आउनुस्, तृप्तिलाई उनकै भाषा र शैलीमा केहीबेर पढौँ-
मेरो बाबाको पोस्टिङ दार्जिलिङमा हुँदा आमासँग भेट भएको थियो । मेरो आमा गाउनु हुन्थ्यो, मेरो आमाको स्वरमा शायद बुवा लठ्ठ भयो । उहाँहरुको प्रेम विवाह भयो र म जन्मिएँ । मेरो आमाबाबाको एउटै छोरी ।
म पढाइमा उत्कृष्ट थिएँ, पढिरहनु पर्ने व्यक्ति । म दुइ सालको उमेरदेखि मोडलिङ शुरु गरेको ! (हाँसो)
एउटा ब्रिटीस कम्पनीको प्रोडक्टको मोडलिङका लागि मेरो जीजाजी विलाश भेण्डेले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । म गुण्डी थिएँ त्यो बेला । मलाई थाहै नदिई, पर्दापछाडि क्यामेरा लुकाएर विज्ञापन खिचिएको थियो । यसरी मैले जान्दै नजानी मसँग कला जोडियो । (हाँसो)
मराठी फिल्म पहिलो पटक खेलेँ । प्रख्यात लेखक मधुसुदन कार्लेलकरले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो आठ वर्षो उमेरमा । त्यसपछि पाँच/छ वटा सिनेमा खेलिसकेपछि एक दिन म 'घर चा भेदी'को सुटिङ गर्दै थिएँ, हृवी. शान्तारामको राजकमल स्टुडियोमा । तुलसी घिमिरे मेरो मामा छ भन्ने थाहा पायो र त्यहीँ तुलसी मामा र शम्भु दाइले मलाई प्रस्ताव राखेको र म नेपाली फिल्ममा आएको ! (हाँसो)
मलाई सबैले मेरो पहिलो फिल्म कुन् भनेर सोध्छन् तर मलाई सधैँ गाह्रो उत्तर लाग्ने यही हो । किनभने तुल्सी मामा र शम्भु दाइ मेरो अभिनय हेर्न स्टुडियोमा आउनुभयो र एक साथ फिल्म खेल्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । अब मैले कसको फिल्म चाँडो र कसको पछि खेलेको भन्नू ! (हाँसो) त्यो बेला यस्तो थिएन, फिल्मको 'क्ल्यासेज' थिएन हो ! टाइम मिलिहाल्यो र खेलेँ ।
नेपाली सिनेमा खेल्नु र मराठी या अरु सिनेमा खेल्नुमा खासै फरक भने छैन हो ! फरक चैँ यहाँ त ड्रेसिङ रुम थिएन, अब त्यहाँ चैँ सबै सुविधा थियो ।
ममा जवानी थियो, उमेर थियो तर कसैसँग प्रेम भएन । किनभने मलाई आम् द बेस्ट भन्ने घमण्ड थियो । फेरि म फिल्ममा बिजी पनि हुन थालेँ हो ! त्यसपछि त अरु कुरा सोच्ने फूर्सदै भएन । कुसुमे रुमाल खेल्दाखेल्दै मेरो बिहेको इङ्गेज्मेन्ट भयो । उहाँलाई मेरो बाबा-ममीले राम्रोसँग चिन्नु हुँदो रै'छ । उहाँ जापान, कोरिया र दुबइतिर सामानहरुको निर्यात गर्नु हुन्थ्यो । एक्लो व्यक्ति (उहाँको आफन्त कोही नभएकाले) भएकाले उहाँको अभिभावक नै मेरो बाबा-ममी हुनुहुन्थ्यो । एरेन्ज्ड लब म्यारिज भयो हाम्रो । (हाँसो)
उहाँ जापानबाट जस्ट भेट्नु आको थियो मेरो बुवाआमालाई । दिवाली थियो त्यसबेला । मैले हेरेँ, लाइफमा सेटल हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो चाहे पहेला हो या बादमा हो । अनि त मैले बिहे गर्ने निर्णय गरेँ । भगवान्को दयाले अहिले दुइटा छोरा छन् । ठूलो छोरा ऋषभ कोरियोग्राफर छ । बम्बइमा उसले डान्स कक्षा दिने गर्दछ । मल्टि मास मिडिया पनि पढ्दैछ । अरुको फिल्ममा असिस्टेन्ट पनि गर्छ । कान्छो छोराले धेरै हिन्दी सिरियल गरिसकेको छ । आविष्कार, सोनपरि, करिश्मा का करिश्मा सिरियल र बर्नभिटा अनि अरु थुप्रै विज्ञापनमा काम गरिसकेको छ । नौ कक्षामा पढ्दैछ । तर उसलाई कलाकारितामा रुचि छैन । ऊ डाक्टर बन्छु भन्दैछ । (हाँसो)
साइनोमा काम गर्दागर्दै मेरो बिहे भयो हो ! मेरो श्रीमान् कोअपरेटिभ भएकोले सिनेमा गरिरहन प्रब्लम भएन । त्यसैले काम गरिरहने मेरो इच्छा थियो । किनभने सप्पै नेपालीहरुले मलाई यति माया दिनुभयो, म त्यसलाई त्यसै छोड्न चाहन्न थिएँ । उहाँहरुले गर्नुभएको विश्वास तोड्न चाहन्न थिएँ हो ! त्यही भएर जब कोसेली फिल्मको अफर आयो मैले त्यो पनि खेलेँ । लाहुरे सुपरहिट भएकोले गर्दा मलाई नेपाली दर्शकको मन तोड्ने मन थिएन । तुल्सी मामाले पनि खेल्नु पर्छ भन्नु भा'कोले कोसेली खेलेँ । कोसेली खेल्दा काखमा ठूलो छोरो थियो हो ! अनि त हरेक सट दिने बेलामा छोरोलाई केही भैहाल्यो कि लड्यो कि रुँदैछ कि- क्या त ! मन अर्कैतिर डुल्ने ! फेरि त्यो बेला धुलिखेलमा सुटिङ हुँदैथियो । एउटा घरको माथ्लो फ्लोरमा छोरो च्याँ च्याँ गरेर रुने, तलको फ्लोरमा म एक्टिङ गर्ने, कस्तो नसुहाउँदो कुरा हो ! त्यो बेला ज्यादै दुःख लाग्यो, यसरी काम गर्नुभन्दा नगर्नै जाति- त्यस्तो लाग्यो हो ! अनि त मैले नचाहँदा नचाहँदै संन्यास लिनु पर्‍यो । (मुस्कान)
१७ वर्षघि नेपाली सिनेमा नखेल्ने भनेर बर्म्बई फर्किसकेपछि अब फेरि नेपाली सिनेमामा फर्किएला, यतै डेरा गरेर बस्नु पर्ला भनेर मैले कैल्यै सोचेको थिनँ, हो ! तर मलाई बर्म्बईमा नै गएर आमाको काखको निर्देशकले बोलाउनु भयो । फिल्मको कथा मन पर्‍यो र खेलेँ तर त्यसपछि धेरै निर्देशकहरुले मलाई फिल्मको अफर गर्नुभयो । जसले गर्दा मैले यतै डेरा खोज्न बाध्य हुनुपर्‍यो । नेपाली जनताले यति धेरै माया गर्नु भएकोमा म ज्यादै खुशी छु । अनि त कस्तो लाग्यो भने, मेरी आमाको गाउँमा मैले तिर्नुपर्ने ऋण अझै धेरै रहेछ । उहाँको भाषा, संस्कृति र मनोरञ्जनका लागि मैले गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रै'छजस्तो लाग्यो, हो ! (हाँसो)
मेरी छोरी भएकी भए, उसको बिहे नहुञ्जेल शायद म फूर्सद पाउँदिन थिएँ होला हो ! तर छोराहरु भएकाले उनीहरुलाई हुर्काइसकेपछि मेरो जिम्मेवारी सकियो । मेरो काम थिएन । १७ वर्षघि जब फिल्म छोडेँ, मैले आफूलाई बिजी राख्न डान्स क्लास जान्थेँ, केटाकेटीहरुलाई पढाउँथेँ हो ! पछि त मलाई मेरै छोराले डान्स सिकाउने भैसक्यो, फूर्सद हुन थाल्यो, अनि चैँ मैले यहाँबाट एक्टिङको प्रोपोज लिएर जाने दाजुहरुलाई मैले रिजेक्ट गर्न सकिनँ हो !
अहिले एक साथ तीन फिल्ममा बिजी छु र इश्वरको कृपाले त्यो फिल्म चल्यो भने र नेपाली फिल्मको इन्डष्ट्रि राम्रो हुँदै आयो भने मैले जेठो छोरालाई पनि यतै बोलाउने विचार गरेको छु । काश, नेपाली फिल्म उद्योग पनि इण्डियाकै जस्तो दह्रो र राम्रो भइदिए ! (हाँसो)
धेरैले शरीरको मेन्टेन कसरी गरेको भनेर सोध्छन् । (हाँसो) आई नीड टु वर्क । त्यत्तिकै बस्नै सक्तिनँ हो ! बानी होला ! मेरो बाबा पनि ८४ भइसक्नु भो, तर हामीभन्दा कत्ता कत्ता ! सिलाई, इलेक्टि्सिटी, तबलादेखि खाना बनाउने सप्पै काम गर्छ ! खासमा मिलिट्रीमा बसेर होला !
डेनी दाजुसँगको अनुभव अमेजिङ ! हि वज् कोअपरेटिभ ! सप्पैलाई हेल्प चाहिन्छ ! कोही पनि एक्लै माथि आउन सक्तैन । हि नोज् द्याट ! हृवाइल वर्किङ विद् हिम्, आई नेभर केम टु थिङ्क द्याट हि इज् ग्रेटेस्ट आर्टिष्ट !
यता आउँदा म मेरो माइत आएकोजस्तो महसूस हुन्छ । म सुटिङमा आउँदा म सुटिङ वरपरका मान्छे भेट्छु, उनीहरुसँग कुरा गर्छ मेरो नेचर नै त्यस्तो छ । त्यो हर्दा मलाई सन्तोष अनुभव हुन्छ ।
देयर इज नो कन्सन्ट्रेशन अन पर्टिकुलर वर्क ! अैले त तपैँ पैसाको पछि भागिरको छौँ हो ! सम्झना र कुसुमे रुमाल राम्रो हुनुको कारण पर्याप्त समयमा गरिएको होमवर्क नै हो । ऎले खै मान्छेलाई समय ?
सम्झनाको डाइलग एकएक घण्टा रट्थेँ । अर्थ सोधेर हैरान पार्थेँ । मेरी आमा पनि पक्का मराठी भको छ है ! कस्लाई अर्थ सोध्नु ? अन्त है, टोन नेपाली नभएकोले गर्दा कुसुमे रुमालदेखि कोसेलीसम्म भारतीले डबिङ गर्‍यो । आमाको काखमा पनि ट्राइ गरेँ तर बम्बेको टोन आयो भन्छ हो ! पक्का, टिपिकल कसरी हुन्छ थाहै भएन ! (हाँसो) अहिले त मेरो धेरै सुधार भयो । बम्बैमा त मलाई यो त पक्का काटमण्डुको भएछ भनेर जिस्क्याउँछ ! अन्त बम्बैमा नेपाली घुस्छ बोल्दाबोल्दै अनि यहाँ बोल्दाबोल्दै हिन्दी, अंग्रेजी घुस्छ । म त यताको न उताको बनेँ हो ! (हाँसो)
- कुसुमे रुमालमा खलपात्रकी आमाको र सम्झनामा तृप्तिको आमाको भूमिकामा देखिने अरु कोही होइन, तृप्तिकी आफ्नै आमा मायादेवी हुन् ।
- सम्झनामा हस्पिटलको दृष्यमा देखिने डाक्टर अरु कोही नभएर तृप्तिका बुवा हुन् ।
- भुवन त्यसबेला निकै कमजोर लाग्थ्यो ! तर बाफ्रे बाफ् अैले त उहाँले धेरै प्रगति गरेको ! कत्ति राम्रो एक्ट गरेको ! - साइनोमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएकी थिइन् तृप्तिले । त्यो बेला उनले १ लाख पचास हजार रुपियाँ पाएकी थिइन् ।